Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmanya & mmuo » Rum bụ nri ụbụrụ gị, mmanya na -ebi, yana ibi ndụ New York
culinary • omenala • Education • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • ndị mmadụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • trending Ugbu a • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche • Mmanya & mmuo
Ịbụ rọm dị njikere
Enwere ike itinye rum n'ime otu NRI, ka emechara - ọ bụ ihe sitere na okpete; enwere ike were ya dị ka ihe eji megharịa ọnụ, n'ihi na ọ na -atọ ụtọ. Agbanyeghị, ọ bụ mmụọ ma tinye ya n'etiti ihe ọ alcoụholicụ na -aba n'anya nwere uru pụrụ iche nke gụnyere ihe nje antibacterial, a na -atụkwa aro ịgwọ akpịrị akpịrị.
Ụfọdụ rọm na -enwe ahụ ike karịa ndị ọzọ na, rọm gbara ọchịchịrị, nke aka ekpe ruo n'ọgbọ na osisi oak a gbara n'ọkụ ma ọ bụ n'osisi osisi na -enye ya ụcha gbara ọchịchịrị na ụtọ siri ike, a na -ahụta na ọ na -enye antioxidants dị mma.
Ụfọdụ nnyocha na -egosi na rọm nwere akụ nke nwere ike inye aka chekwaa mkpụrụ ndụ ụbụrụ.
Ọ nwekwara ike belata ihe egwu dị na nkwarụ na Alzheimer's (David Friedman, Nri nri: Otu esi eri nri na ụwa nke fads na akụkọ ifo).
Kedu ihe bụ Rum?
A na-eme Rum site na ngwaahịa ngwaahịa okpete dị ka molasses ma ọ bụ sirop okpete. A na-agbari shuga n'ime mmanya mmanya na ike dị iche iche na mmanya site na olu (ABV) na-esi na pasent 40-80, na-ebuga ihe dị kalori 97 kwa oz. ogbugba nke ihe akaebe 8 (ya na Coke, gbakwunye kalori 80 ọzọ). Ogo nke rọm na -adabere na ngwongwo nke molasses, ogologo ịgba ụka, ụdị agba a na -eji, na ogologo oge eji eme agadi na gbọmgbọm.
A na -ekewa Rums site na agba (ya bụ, ọcha, ojii/ọchịchịrị, ọla edo, enweghị mkpuchi), ụtọ (ntụgharị, ụtọ/ụtọ) na afọ. Rum gbara ọchịchịrị emeela afọ 2+ n'ọkụ osisi oak gbara ọkụ na -emepe agba ojii/agba aja aja (anaghị enyocha ya ka usoro ịka nká gasịrị). Ọla edo ma ọ bụ amber emeela agadi na osisi oak gbara ọkụ maka obere oge (ọnwa 18). Enwere ike ịgbakwunye Carmel mgbe usoro ịka nká wee nye ụcha ọla edo doro anya. A na-echekwa rum dị ọcha (nke a maara dị ka ọlaọcha, ọkụ ma ọ bụ doo anya) na arịa igwe anaghị agba nchara ma ọ bụ casks ma mee agadi afọ 1-2 na ihe nzacha unyi iji wepụta agba na adịghị ọcha ọ bụla mgbe usoro ịka nká wee nwee ụtọ nke dị nfe karịa amber ma ọ bụ rọm gbara ọchịchịrị ma na -ahụkarị na mmanya karịa ịchacha nke ọma. A na -etinye rum na -esi ísì ụtọ n'oge a na -agwakọta ya na pawuda, aniseed, ginger, rosemary ma ọ bụ ose na mkpokọta ihe ruru pasent 2.5. Achịcha na -esi ísì ụtọ na -agbakarị ọchịchịrị na shuga ma ọ bụ caramel agbakwunyere maka ụtọ.
Rum jikọtara ya na Ịgba ohu, nnupụisi na ọrịa
Ọ bụ ezie na rọm na -atọ ụtọ ma na -akpọkọta oriri na mmanya, ihe ọ beụverageụ nwere akụkọ azụ gbara ọchịchịrị. Akụkọ ihe mere eme na -ejikọ rọm (mgbe etinyere ya n'ugbo okpete na narị afọ nke 17) na omume ịgba ohu ebe a na -amanye ndị mmadụ ka ha na -eto ma na -egbute okpete n'okpuru ọnọdụ ọjọọ. A manyere ndị ọrụ ịrụ ọrụ n'esepụghị aka ka ha gbaa ụka ma kesaa molasses iji mee rọm nke ejiri ego zụta ọtụtụ ndị ohu.
Na mbido (na ọtụtụ narị afọ), a na -ahụta ịdị mma ngwaahịa ahụ ka ọ daa ogbenye na ọnụ ala, nke ndị ohu na -akụ okpete na -ere ya nke ukwuu yana ndị otu mmekọrịta akụ na ụba dị ala. Rum rụkwara ọrụ dị mkpa n'akụkọ ihe mere eme na naanị mwakpo ndị agha mere na Australia, Rum Rebellion (1808), mgbe a kwaturu Gọvanọ William Bligh n'otu akụkụ n'ihi mbọ ọ na -agba iji kwụsị ị rumụ rum dị ka ụzọ ịkwụ ụgwọ.
Azụ ahịa ohu na mpaghara Atlantic kwụsịrị na narị afọ nke 19, agbanyeghị, ịgba ohu nke oge a ka na-aga n'ihu (ya bụ, ọrụ ugbo na akwa na-enye ụdọ). Ngalaba na -ahụ maka ọrụ na Amerịka chọpụtara na ọrụ ụmụaka bụ ihe na -emepụta okpete na mba iri na asatọ. N'ugbo ụfọdụ, ndị ọrụ na -eji aka egbutusị okpete n'oké okpomọkụ na -ebute ihe egwu ahụike. Nnyocha na -achọpụta na nrụgide okpomọkụ nwere ike ibute mmepe nke ọrịa akụrụ na -adịghị ala ala.
Amụma amụma Market na -achọpụta na a na -eji ahịa rọm zuru ụwa ọnụ ọnụ ijeri US $ 25 (2020) ma buru amụma na ọ ga -eto ruo ijeri US $ 21.5 site na 2025. N'ụwa niile, ego a na -enweta kwa afọ site na mmepụta rọm bụ atụmatụ $ 15.8 ijeri (2020) nwere amụma uto na -atụ anya. nke pasent 7.0 n'ime oge afọ ise (5-2020) ka a na-amụbawanye agụụ ụwa maka ngwaahịa mmụọ dị oke mma na nke okomoko na-elekwasị anya n'ịdị mma na ụdị ama ama.
USA bụ onye na -azụkarị asịrị na nde $ 2435 na -enweta na ego (2020) yana mpịakọta ahịa nke abụọ na -abụghị vodka na whiskey na ụdị mmụọ. Ndị na -emepụta rọm bụ mba ndị dị na Latin America na Caribbean; agbanyeghị, USA nwere ọtụtụ mmalite na ụdị a yana na Philippines, India, Brazil, Fiji na Australia. Euromonitor International chọpụtara na India na -eduzi ahịa rọm mba ụwa.
Mgbanwe/ihe ịma aka maka Rum
Ọkara puku afọ (ndị amụrụ n'agbata 1981 na 1994/6) na -achịkwa ụdị rọm ọhụrụ ahụ ebe rọm bụ ihe ọ drinkụ drinkụ dị ọnụ ala ma e jiri ya tụnyere mmụọ ndị ọzọ. Ahịa a lekwasịrị anya nwere ike imefu ma gosipụta ekele maka mmanya na -enwe mmasị rọm (karịa mmanya ndị ọzọ na -aba n'anya). Ụwa na -amanye rọm ka ọ gbanwee ka ndị na -azụ ahịa na -achọ ngwaahịa nwere shuga belatara, nke na -adigide, na ọkwa adịchaghị. Ndị na -emepụta Rum ewebatala ngwaahịa rọm ọhụrụ n'ọma ahịa yana ahụmịhe na -atọ ụtọ lekwasịrị anya na ụtọ na -enye ụtọ, buttery, caramel, mkpụrụ osisi ebe okpomọkụ na akwụkwọ vanilla nke na -ejedebekarị na anwụrụ anwụrụ na molasses.
O nwere ike ọ gaghị abụ ihe a ma ama, mana ọtụtụ rum na -emepụta mba dị na Caribbean emela osisi okpete nke ha ma na -ebubata okpete okpete, ihe ọ juiceụ canụ ma ọ bụ molasses dị ka ntọala ha na mbubata na -emepụta ihe ịma aka ọhụrụ maka mba agwaetiti ndị a.
1. Molasses, ihe sitere na mmepụta shuga dị ọnụ ala karịa mgbe ahụ na-eji okpete dị ọcha na mmepụta rọm; agbanyeghị, ka ọchịchọ shuga na -ebelata, mmepụta shuga na -agbada nke mere na enwere obere molasses maka mbupụ. Ọchịchọ na -ebelata na -ebelata ọnụahịa maka okpete shuga na nke a na -echegbu ndị na -emepụta rọm maka ịnye molasses nwere ike pụọ n'anya kpamkpam ka ndị ọrụ ugbo na -ahapụ okpete okpete maka ngwaahịa ọrụ ugbo bara uru. Enwekwara ike na ọnọdụ ahụike ga-agba ndị gọọmentị ma ọ bụ ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịhazi iwu ume ka ha tinye oke shuga na-emetụta ọnụnọ shuga na ọnụ ahịa ngwaahịa a rụchara.
2. Usoro mmepụta na -adigide dị mkpa nye ndị na -azụ ihe ọ newụ newụ ọhụrụ ka ha na -echegbu imeju mkpa ha ozugbo ma ọ bụrụ na ha etinyeghị ọdịnihu egwu. Rum mmepụta nwere aha ọma nke na -emepụta mmetụta gburugburu ebe obibi dị elu n'ihi ala a chọrọ iji na -eto okpete, mmanụ ọkụ chọrọ ka ewepụta ọkụ iji gbanwee okpete okpete ahụ ka ọ bụrụ ihe na -agba ume na oke mmiri ejiri mee ya yana ihe ejiri mee ya. nkwakọ ngwaahịa. Iji mezuo ihe ndị chọrọ nkwado, ụlọ ọrụ ahụ ga -atụle ụzọ ọhụrụ maka njikwa akụ na/ma ọ bụ nchekwa ma mepụta nkwakọ ngwaahịa nke nwere ike imebi ma ọ bụ ihe omume gburugburu.
Maka ụlọ ọrụ dị njikere ma nwee ike ịga ebe dị anya, na ịza ajụjụ ndị a na-achọ ugbu a, enwere ozi dị mma ebe ndị na-azụ ahịa na-adị njikere ịkwụ ụgwọ ọnụ ahịa maka ngwaahịa ọhụrụ ahụ nwere nnukwu ọkwa na ọkwa dị elu. Golden Rum dị njikere ịbụ nnukwu omume na -esote na ngalaba ndị mmụọ, na -atụ anya ire ahịa na -abawanye site na pasent 33 na 2021. N'ọganihu nke uto a, ọ ga -akarị gin site na 2022 (internationaldrinkexpo.co.uk).
Ndị New York nabatara Rum
Na nnọkọ ọgbakọ Rum nke dị na Manhattan n'oge na-adịbeghị anya, Federico J. Hernandez na TheRumLab haziri mmemme na-atọ ụtọ na mmụta na-atọ ụtọ na-atọ ụtọ nke ọtụtụ asịrị nke mba ụwa nke ọtụtụ narị ndị enyi rum na ndị na-akwado ya na-enwe. Rum ọhụrụ ahụ na -enye ahụmịhe mmetụta uche nke na -ezute ma na -akarịkarị ihe a tụrụ anya ya.
Daniel Mora, Ron Centenario, Rum nke Costa Rico
Ian Williams, Onye edemede, Rum: Akụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya na ezigbo mmụọ nke 1776
Emebere ememme Rum ọzọ maka Septemba 2021, San Francisco, CA. Maka ozi ndị ọzọ: californiarumfestival.com
September 5, 2021 na 13: 56
Ụda dị ka ezigbo nhọrọ m!